चीन बन्याे विश्वकै धनी देश, अमेरिकाको सम्पत्ति बढेन
November 17, 2021 N88LeaveaComment on चीन बन्याे विश्वकै धनी देश, अमेरिकाको सम्पत्ति बढेन
लण्डन । चीनले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पछि पार्दै विश्वकै धनी मुलुक बनेको छ । २० वर्षमा चीनको सम्पत्ति तीव्र गतिले बढिरहेको छ । अमेरिकाको सम्पत्ति भने सोही गतिले बढेको देखिँदैन । कन्सल्टेन्सी फर्म म्याकिन्से एण्ड कम्पनीको रिपोर्टअनुसार पछिल्लो दुई दशकमा विश्वभरको कुल सम्पत्ति तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । विश्वको ६० प्रतिशत आय रहेका १० […]
आजदेखि शुरू भएकाे ई-पासपोर्टको कति तोकियो शुल्क ?
November 17, 2021 N88LeaveaComment on आजदेखि शुरू भएकाे ई-पासपोर्टको कति तोकियो शुल्क ?
काठमाडाैं । सरकारले बुधबारदेखि नेपालमा विद्युतीय राहदानी (पासपोर्ट) वितरण सुरु गरेको छ । राहदानी विभागको वेबसाइटमार्फत अनलाइन आवेदन भर्ने नागरिकले बुधबारदेखि नै ई(पासपोर्टको लागि औँठाछाप (बायोमेट्रिक) दिन जाने मिति र समय पाउन थालेका छन् । करिब ७० लाख मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) वितरण गरेपछि सरकारले ई–पासपोर्ट वितरण थालेको हो । संस्कृतिविद् तथा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन […]
महिलाले लगाउने तीन महिने संगीनी सुई खसीलाई …. !
November 17, 2021 N88LeaveaComment on महिलाले लगाउने तीन महिने संगीनी सुई खसीलाई …. !
भक्तपुर । घर पालुवा पशुलाई गर्भ निरोधक सुई दिइन्छ भन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । काभ्रेका एक किसान भक्तपुरको कमल विनायकमा रहेको औषधी सञ्चालकसँग तीन महिने संगीनी सुई माग्दै थिए । उनले दुईवटा सुई ती औषधी पसलेसँग मागे । किसानले महिलाले लगाउने गर्भनिरोधक सुई किन मागे भन्दा सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । ती किसानको […]
काठमाडौंको काँडाघारीमा जमिनमुनीबाट ग्यास निस्कियो, स्थानीय त्रसित
November 17, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौंको काँडाघारीमा जमिनमुनीबाट ग्यास निस्कियो, स्थानीय त्रसित
काठमाडाैं । काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरामा पानीको बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको छ । बुधबार कागेश्वरी मनहरा ९ को सुन्दरचोकस्थित तरकारी बजार नजिकै बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यास निस्किएको हो । स्थानीयले घर बनाउन चाहिने पानीको ब्यवस्था गर्नका बोरिङ खन्ने क्रममा ग्यासको मुस्लो निस्किएको थियो । बुधबार दिउँसो १२ बजेबाट ग्यास निस्किएको स्थानीयले बताएका छन् । सुरुको […]
November 17, 2021 November 17, 2021 N88LeaveaComment on पुरुषले मात्रै खाना पकाउने गाउँ
नयाँदिल्ली । भारतको एउटा यस्तो गाउँ छ जहाँका घरमा खाना पकाउने काम केवल पुरुषहरूको मात्र हुन्छ । भान्सेको गाउँ अर्थात् भिलेज अफ कुक्स भनिने कलायुर गाउँ नै त्यस्तो गाउँ हो जहाँ हरेक घरका भान्सामा पुरुषको हात चल्दछ । गाउँका पुरुषहरूले किचेनका राजा भनिन्छ । पछिल्लो ५ सय वर्षदेखि उक्त गाउँमा पुरुषहरूले नै घरको खाना पकाउने […]
देशैभरी एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर, आउँदो निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ – ओली
November 17, 2021 N88LeaveaComment on देशैभरी एमालेमा प्रवेश गर्नेको लहर, आउँदो निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्छ – ओली
काठमाडौं । बाँकेका स्वतन्त्र समूहका नेता पशुपति दयाल मिश्रसहितका ३ हजार ९४३ जना नेता-कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् । राजपाका पूर्वसहमहामन्त्री मिश्र २०७४ सालको संघीय सांसदको निर्वाचनमा स्वतन्त्र समूहको नाममा सूर्य चिन्हबाट प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । राजनीतिक रूपमा बलियो पकड भएका मिश्र राजपाका इस्तिहाक राईसँग ५ हजार ६०० मतको अन्तरले पराजित हुनुभएको थियो । केही […]
केपी ओलीको त्यो एक भिजनले देशै एमालेमै बनायो
November 17, 2021 N88LeaveaComment on केपी ओलीको त्यो एक भिजनले देशै एमालेमै बनायो
काठमाडौं । कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट एमाले बन्दै हो ? मैले २०५३ देखि २०६३ सालसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विभिन्न पदमा बसेर काम गरेको छु । गाउँ इकाइ समितिको अध्यक्षको रुपमा दुई पटक काम गरे । क्षेत्रीय अध्यक्ष र जिल्ला सदस्यको रुपमा काम गरें । समयको माग अनुसार मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न आन्दोलन भएपछि जनताको माग राप्रपाबाट सम्बोधन […]
कृष्ण महरालाई ‘फसाउने’ रोशनी शाही आएपछि स्वास्थ्यमा भागाभाग
November 17, 2021 November 17, 2021 N88LeaveaComment on कृष्ण महरालाई ‘फसाउने’ रोशनी शाही आएपछि स्वास्थ्यमा भागाभाग
काठमाडौं । तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई ‘फसाउने’ रोशनी शाही स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आउन थालेपछि कर्मचारीबीच भागाभाग सुरु भएको छ । संसद सचिवलायमा काजमा गएकी अनमी शाही काज फिर्तासँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आएर किचकिच गर्न थालेपछि कर्मचारीहरू कार्यकक्ष छाडेर भाग्न थालेका हुन् । उनी आन्तरिक प्रशासन महाशाखामा धर्ना दिएर बस्न थालेकी छिन् । नियमित हाजिर […]
यी नर्स जसले ५ हजार जनालाई सुत्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा संसार छाडिन् !
November 17, 2021 N88LeaveaComment on यी नर्स जसले ५ हजार जनालाई सुत्केरी गराइन् तर आफै सुत्केरी हुँदा संसार छाडिन् !
३८ वर्षीया नर्स ज्योति गवली भारतको महाराष्ट्र राज्य, हिंगोलीको सिभिल अस्पताल, कार्यरत थिइन् । वितग ५ वर्षदेखि त्यहाँको प्रसूती वार्डमा कार्यरत नर्स ज्योतिले त्यसअघि विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेका थिइन्। ५ वर्ष उक्त अस्पतालको प्रसूति वार्डमा काम गर्दा उनले ५ हजार भन्दा बढी महिलालाई सुरक्षित सुत्केरी गराएको उनका सहकर्मीले बताएका छन् । जब उनी आफैँ […]
प्रचण्डलाई स्थानीयवासीले बाटोमै घेरा हालेपछि…
November 17, 2021 N88LeaveaComment on प्रचण्डलाई स्थानीयवासीले बाटोमै घेरा हालेपछि…
जनकपुरधाम । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा वर्षौंदेखि खाली रहेको मणिपालको जग्गामा छिट्टै ठूलो परियोजना आउने बताएका छन् । रामगोपालपुर नगरपालिकामा एकैसाथ आठ स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रममा जाँदै गर्दा सोही सडकखण्डमा पर्ने जलेश्वर नगरपालिका–१ स्थित मणिपालको जग्गा नजिकै आज बिहान साढे ११ बजे स्थानीयवासीले उनलाई रोकेर वर्षौंदेखि किसानको उब्जाउ […]